Ndewo, a bụ m onye Mac. Ma abụ m PC. | Martech Zone
Ndewo, a bụ m onye Mac.
Ma abụ m PC.
PC: Enwere m RAM, Motherboard, Processor, Mouse, Keyboard, draịvụ ike yana Monitor.
Mac: M na-eme. Ma ebe ọ bụ otu ndị ahụ na-eme sistemụ arụmọrụ m niile, ha na-arụ ọrụ ka mma. Ọ bụ ọtụtụ koodu dị ala iji jikwaa.
PC: Ahụrụ m. Adị m obere ọnụ karịa na ị nwere ike ijikọ ma dakọtara ọtụtụ puku nhọrọ na ọbụnadị wuru m onwe gị. Enwere m ike anaghị arụ ọrụ dị ka gị, mana m na-akwado ọtụtụ nde ngwaọrụ ndị ọzọ. O di nwute, mgbe mmadu dere ihe nzuzu, o nwere ike ghagbue m.
Mac: Na-enwe uche, ọ bụ ya mere na anyị anaghị ekwe ka ndị ọzọ mee ngwongwo anyị. Enwere m olileanya na ị ga-arụ ọrụ na nke ahụ. Chei, opekata mpe anyị nwere ike ikwurita onwe anyị!
PC: Chọpụta nwere ike! Nwere ike ịhụ m na ntanetị gị, enwere m ike ịhụ gị na nke m. Anyị abụọ na-akwado Ikuku, Bluetooth, Firewire na USB.
Mac: Mgbe ụfọdụ, m na-eji obere oyi karịa gị.
PC: Ee, mana ọ bụrụ na ndị folks dị njikere imefu obere oge, enwere m ike ile anya. Ọ dị mma, enwere m ike ịdị ka gị na sọftụwia isiokwu mara mma.
Mac: Chaị. Ma ebe anyị nwere otu ndị nhazi ahụ ugbu a, enwere m ike iji sọsọ sọftụwia gị rụọ ọrụ aghota.
PC: can nwere ike? Nke ahụ yiri ka ọ bụ obere akụkụ, ọ bụghị ya?
Mac: Chọpụta… mana ọ nweghị onye na-eme mkpesa n'ihi na ị bụ otu n'ime nnukwu anụ 'azụmaahịa' ahụ na ụmụ okorobịa anyị niile kwesịrị ịkpọ asị.
PC: Kpọọ asị, enyi! Zọ ahụ mara na onye na-eche banyere gị (Apple) na-ejegharị na $ 472 nde na uru yana oke 48%. Ọ bụ ihe ijuanya na ọ na-eme m ka ihe ọjọọ na-arụ ọrụ na onye ọ bụla, ebe ị na-ekereghị ihe ọ bụla ma na-erite nnukwu uru,
Mac: Shhhhh. Agwala onye ọ bụla. Emechakwa, anyị ga-eji ekwentị pụta oge adịghị anya nke ga - abụ nnukwu onye na - ere ahịa.
PC: Ekwentị? Chaị… ndị ahụ apụtaghị obere oge gara aga?
Mac: Ee, mana anyị ga-eme ka ọ dị jụụ.
PC: Ego ole bụ ihe nju oyi?
Mac: 50% - uru-oke-oyi.
PC: Chaị. Na ụdị ụdị akụkụ ahụ, ị ​​ga-eche na ị nwere ike idobe ọnụahịa gị ntakịrị. E kwuwerị, ndị omenkà na ndị na-akụ egwu anaghị akpata oke ego… ha na-eme?
Mac: Mba, mana ha di njikere itinyekwu ego na ihe okike.
PC: Ọ dị mma ịdị jụụ.
Mac: Uzo rue ulo oba, enyi!
IHE: Edere ma zipụ ya na MacBookPro
Feb 6, 2007 n’elekere 5:58 nke abali
Ebube post Doug !! Kin dị ka a chịkọtara mara mma nke ukwuu PC-Mac na iPhone arụmụka na otu obere na ụtọ post. Ị mere nke ọma!
Feb 6, 2007 n’elekere 10:21 nke abali
Feb 6, 2007 n’elekere 10:48 nke abali
Ex-cell-ent! In mara, Justin Long na-aga n'ihu na mgbasa ozi Mac. Mara na ọ rịọrọ oke ego.
Feb 6, 2007 na 1:12 PM
You'll ga-ahụ nke ahụ bụ asịrị. Ọ na-arapara na mgbasa ozi ndị ahụ nwa oge. Mgbasa ozi ndị ahụ na-arụ ọrụ dị egwu - enwere m obi abụọ na ọ ga-emeri Mac na ndị ahụ.
Feb 6, 2007 na 4:30 PM
pseudo-monopolies emetụbeghị ezigbo mma!
Feb 6, 2007 na 4:39 PM
Yabụ eziokwu, Gavin. Abanyeghị m na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke a mana ọ na-echetara m gọọmentị… ọ bụrụhaala na ndị Republican na ndị Democrats nwere onye ọ bụla na-akpọ ibe ha asị, ọ dịghị onye na-ahụ otu ha si emegbu na imeju akpa ha.
Feb 6, 2007 na 11:07 PM
Enwere m ọchị ọchị a! N'ezie, Apple bụ onye na-achị ọchị. Ka ọ dị ugbu a, Dell enweela onye isi ya ọrụ. Ma eleghị anya, ọ ga-akwụghachi Dell Dude maka azụmahịa ha iji luso onye Mac ọgụ!
Feb 9, 2007 n’elekere 9:53 nke abali
Ahụrụ m ya n'anya Mac bụ ihe egwuregwu ụmụaka. M na-edezi vidiyo na PC m ma ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu. Ọ bụ ezie na m na-akụ bụ apụl ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu na PC m. Na-eje ije na Best zụta na ha nwere ọtụtụ puku nke software aha maka PC na naanị ole na ole maka MAC. Ọ dị m nwute na Macs anaghị akpọchi BS ahụla m ka ha na-eme ya.
ebe ọ bụ
M hụrụ n'anya a ntinye 😆 Ọ bụ ugbu a ibe 😛 Ma n'ezie Mac do aka-acha anụnụ anụnụ-ọnwụ na ihuenyo kwa, naanị ya na-eme na-erughị Windows, Windows XP ama ezigbo ụlọ ọrụ na m ezie. Ọ bụ ezie na m bụ naanị onye ọrụ Mac ọhụrụ, mana echere m na m ga-enwe ohere ịhọrọ kọmputa m ọzọ, ọ ga-abụ ezigbo nsogbu a
Echere m na ihe ọma gbasara mgbasa ozi Mac bụ na ha dị mfe iji ọchị. Ekwenyesiri m ike na Apple ghọtara na mgbasa ozi ọhụụ abụghị nke kachasị ukwuu, mana okwu ndị a - nke ọma ma ọ bụ nke ọjọọ - ga-eme ka elebara ogige Apple anya.